မောင်းသူမဲ့ စနစ်နဲ့ Convertible Sports ကား တစ်စီးကို ချပြလာတဲ့ Audi ! – MyMedia Myanmar
Audi အနေနဲ့ မကြာခင်မှာပဲ ထူးထူးခြားခြား Concept ကား ၃ မျိူးကို ချပြလာဖို့ ရှိနေပြီး နာမည်တွေ အနေနဲ့တော့ Sky Sphere ၊ Grand Sphere နဲ့ Urban Sphere တို့ဆိုပြီး ပေးထားပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ အဆိုပါ ထူးထူးခြားခြား ၃ စီးထဲက တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Grand Sphere နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ် သိရှိလာရပါပြီ။ အဆိုပါကားကိုတော့ မြူးနစ် မြို့မှာ စက်တင်ဘာမှာ ကျင်းပမယ့် IIAA ကားပြပွဲမှာ ချပြသွားဖို့ စီစဉ် ထားတဲ့ ဇိမ်ခံ Sedan ကား တစ်စီး ဖြစ်ကာ သာမန် ဇိမ်ခံကားတွေနဲ့တောင် ဘာမှ မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောရမယ့် သဘောပါပဲ။ အဲ့ဒီ မတိုင် ခင်တော့ အခုလာမယ့် ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကယ်လီဖိုးနီးယား ရဲ့ Malibu က Design Center အသစ်ကြီးမှာ Sky Sphere ကို အရင် ဆုံး ပြသသွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ကားကိုတော့ အများပြည်သူကို ချပြဖို့ အတွက် Pebble ကမ်းခြေ က Monterey Car Week ကို ရွေးချယ်ထားတာလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ အဆိုပါ အသစ်ထွက်ပေါ်လာမယ့် Concept အတွက် Audi ရဲ့ Senior Vice President ဖြစ်သူ Henrik Wenders နဲ့ Head of Design ဖြစ်သူ Marc Lichte တို့က သူတိုကား ဒီဇိုင်းကိုပေါ်လွင်စေမယ့် Video အတို လေး တစ်ခုကို ကြိုးစားဖန်တီးခဲ့ ကြပါတယ်။ အခု ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Video ကတော့ တကယ့်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ထူးခြားတဲ့ Cinematography ရိုက်ချက်တွေကို မြင်ခဲ့ ရပြီးတော့ ထူးခြားချက် အနေနဲ့ ၁၉၃၇ ခုနှစ် ထုတ် Horch 853 A Cabriolet ကိုပါ ထည့်သွင်း ရိုက်ကူးထားတာပါပဲ။
Horch ဆိုကတော့ အခုခေတ် မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ Audi ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးအဖြစ် မပြောင်းလဲခင်မှာ Auto Union ရဲ့ အဖွဲ ဝင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ ပါ။ ဒါကြောင့်လည်းအခု Video ထဲမှာ Audi အတွက် တကယ်ကို ဂုဏ်ယူဖွယ် ချပြလို့ကောင်းတဲ့ သမိုင်းကြောင်း ကောင်းကောင်း တစ်ရပ် ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထူးထူးခြားခြား ဆက်စပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် တော့ အခု ပြသသွားတဲ့ 853 A ရဲ့ ရှေးဟောင်း ဒီဇိုင်းနဲ့ Sky Sphere ရဲ့ ရှည်လျားမယ့် Silhouette တို့ အကြားအချိတ် အဆက်တွေ ရှိလာနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ Lichte က Horch နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ပြောကြားရာမှာတော့ ဒီဇိုင်း ကောင်း တစ်ရပ်မှာ အရေးအကြီးဆုံးက အချိုးအစပ်တွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ အဆိုပါ အချိုး အစပ် တွေ တကယ့်ကို ထူးထူးခြားခြား ကောင်းမွန်နေပြီး Wheelbase အရှည်တွေ ၊ Overhang မရှိတာတွေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဘောနက်ဖုံး တွေက တကယ်ကို အရသာရှိတယ်လို့ ဆိုထား ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခု ကားကို ထုတ်သွားလိုက်တာနဲ့ တင် လမ်းမထက်က ကားဘုရင်လို ကို ခံစားရနိုင်တာကြောင့် ခေတ်လွန်ကားအသစ် Sky Sphere အတွက် အတော် များများ Inspire ယူထားတဲ့ ကားလည်း ဖြစ်တယ်လို့ Lichte က ထပ်မံပြောကြားသွားပါတယ်။ Sky Sphere ကားကိုညွှန်းဆိုရာမှာတော့ Sports Transformation Vehicle အဖြစ် ပြောကြား ထားတာ ဖြစ်ပြီး မောင်းသူမဲ့ စနစ်သစ်တွေ နဲ့ အတူ ဆန်းဆန်းပြားပြား မြင်ရမယ့် Sports Car စစ်စစ် လည်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထား ပါတယ်။ အဆိုပါ Concept ကားရဲ့ အတွင်းခန်းကိုမမြင် ရသေးပေမယ့်လည်း ယူဆလို့ ရတာ တစ်ခုကတော့ သေချာပေါက် ထူးထူးခြားခြား ဇိမ်ခံပုံစံ ကို အပြည့်အဝ ပေါ်လွင်နေစေမှာ သေချာပါတယ်။ အခု Teaser မှာ မြင်ရသလောက်ကတော့ Bumper ပေါ်မှာတင် မယုံကြည်နိုင် လောက်အောင် တွေ့ထား ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက် ခန့်မှန်းလို့ ရတာ ကတော့ 2022 Audi e-Tron GT လိုမျိုးပဲ အခု ကားသစ်ကလည်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သီးသန့်သုံးကားပဲ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကားရဲ့ နာမည်ကိုက Sky ဆိုတာ အတော်လေး ထင်ရှားနေကာ အမိုးပွင့် ကားတစ်စီး ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာကိုတော့ Audi ဘက်ကနေ အခု မှထုတ်ပြောလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိတော့ အဆိုပါ Sky Sphere အနေနဲ့ လည်း ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်း အဆင့်အထိ မရောက် သေးပဲ Concept အဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ပြောကြားထား ပါတယ်။ နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ အခု ခေတ်ကားဝယ်ယူသူ အများစု က SUV တွေ နဲ့ Crossover တွေ ဘက်ကို ပိုပြီး အကြိုက်တွေ့လာကြတဲ့ အချိန်မှာ Audi အနေနဲ့ အခု လိုမျိုး Convertible Luxury Sport ကား ကို မိတ်ဆက်ဖို့ ကြိုးစားလာနေတာပါပဲ။ တကယ်တော့ Audi မှာလည်း Mid-Engine သုံးထား တဲ့ R 8 က လွဲလို့ Mercedes Benz SL တို့ BMW 8 Series တို့ကို ကောင်းကောင်း ယှဉ် နိုင်မယ့် Flagship Luxury Convertible ကား ကောင်း မရှိသေးဘူးလို့ ပြောလို့ရတာကြောင့် အခု ကားအသစ်က အပြောင်းအလဲ ကြီးကြီးမားမားတစ်ရပ် ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်ရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post မောင်းသူမဲ့ စနစ်နဲ့ Convertible Sports ကား တစ်စီးကို ချပြလာတဲ့ Audi ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-07-30T15:31:21+06:30July 30th, 2021|MYCARS MYANMAR|